aXpire သည် Blockchain မြင်ကွင်းကိုလွှဲပြောင်းရန်သတ်မှတ်သည်
aXpire, with its enormous experience within the software development landscape also boasts ofatoken, the AXPR Token. Unlike many digital tokens, the AXPR token is equipped withaburn function as well asadual blockchain advantage as it sits on the Ethereum network as well as the Binance chain. The token’s burn function permanently reduces its supply by buying and burning AXPR tokens with 5% revenue generated by aXpire from fees and software sales.
လာမယ့် Altcoin သတင်းများ, Blockchain သတင်း, Cryptocurrency သတင်း, သတင်း
စာရေးသူနှင့်သုတေသီ။ Blockchain သည်အကြီးဆုံးတီထွင်မှုများစာရင်းတွင်ရှိသည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာပြီးလျှင်ဒုတိယဖြစ်သည်ဟုထင်သည်
Tags: aXpire, ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chain, မြင်ကွင်းတစ်ခု, အစုံ
အတွေးအခေါ်ပညာရှင် Stefan Molyneux က Bitcoin သည်လူ့သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးသော jailbreak ဖြစ်သည်။
Bitcoin ငွေ, Dogecoin, Monero စျေးနှုန်းအားသုံးသပ်ခြင်း: 22 ဖေဖော်ဝါရီ